Xulka Iceland oo Taariikh Sameeyay
Xulka kubadda cakta Iceland ayaa marki ugu horreeysay taariikhda u soo baxay ciyaaraha koobka aduunka ee sanadka danbe ka dhici doonta dalka Russia, kadib marki ay xalay 2-0 ku garaaceen xulka Kosovo.
Dalkaan ayaa sidoo kale naqday wadanki ugu dadka yaraa ee abid ka qeybgala koobka aduunka. Iceland ayaa waxaa ku nool dad ka nus milyan ruux. Goolashi ay xalay ku badiyeen ciyaartoodi ugu danbeysay ee is-reeb-reebka ayaa waxaa u kala dhaliyay Gylfi Sigurdsson iyo Johann Gudmundsson.
Ma ahan marki ugu horreeysay oo ay Iceland ka yaabsadaan bulshada jecel ciyaaraha kubada cakta, ee sidoo kale waxay wacdaro la yaab leh ka dhigeen ciyaarihii Qaramada Yurub ee Euro 2016 markaas oo ay wareegii 16-ka ku reebeen xulka England.
Ciyaarihi kale ee xalay dhacay ee is-reeb-reebka loogu soo baxayo koobka aduunka waxay xulalku isu arkeen sidan.
Finland 2 - 2 Turkey